Verizon Messages 6.8.4 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 6.8.4 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ဆက္သြယ္ေရး Verizon Messages
Verizon Messages ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ထပ်တူပြုခြင်းကိုသင့်စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်, ကွန်ပျူတာနှင့်ပင်စမတ်နာရီ feature Verizon ကမက်ဆေ့ခ်ျကို အသုံးပြု. ချိတ်ဆက်နေပါ။ သငျသညျ devices များအကြား switching တဲ့အခါတောင်မှသွားစကားလက်ဆုံစောင့်ရှောက်လော့။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်စုချတ်, စာသားများ, ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများနှင့် Starbucks က, အမေဇုန်လိုစတိုးဆိုင်များမှာတက်မှ $ 100 ကိုတန်ဖိုးရှိလက်ဆောင်ကတ်များအားဖြင့်မိသားစု, သူငယ်ချင်းအသင်းဖော်များနှင့်ထို့ထက် ပို. နှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါနှင့်ထို့ထက် ပို. ။
အခုတော့သူမည်သူမဆိုကို download လုပ်ပါနှင့် Verizon ကမက်ဆေ့ခ်ျများ, ပင်မဟုတ်သည့် Verizon ကဖောက်သည်များ (သဟဇာတကိရိယာများပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါ) နဲ့ chat နိုင်ပါတယ်။
သစ် Group မှချက်တင်ထိုင် - ထရန် 250 လူတို့နှင့်အတူပိုကြီးအုပ်စုချတ်ဖန်တီးပါ။ စက္ကန့်အတွင်းဓါတ်ပုံ / ဗီဒီယို Send နှင့်လက်ခံရရှိသည်။ ကိုယ်စားပြုပုံ, နောက်ခံနဲ့ပိုပြီးနှင့်အတူသင်၏ချတ်အတှေ့အကွုံ personalize ။ သငျသညျပင်စကားလက်ဆုံအသံပိတ်သို့မဟုတ်ထည့်ပါသို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ခုသို့မဟုတ်အုပ်စုအသစ်ဖန်တီးခြင်းမပါဘဲဖယ်ရှားနိုင်သည်။
NEW Yelp ပေါင်းစည်းရေး - ထိုပေါင်း menu ကိုထိပုတ်ပါနဲ့အလွယ်တကူ app ကိုအတွင်းကနေကို Yelp access ။ စားသောက်ဆိုင်, ဖျော်ဖြေရေး, လမ်းညွန်ရှာရန်။ အစီအစဉ်များ Make အပေါင်းတို့နှင့်တကွသင်၏ချတ်အတွင်းအသေးစိတ်မျှဝေ။
NEW Kanvas အပ်ဒိတ်များ - ဖန်တီး. ပေးပို့ထုံးစံ GIF များနှင့်လွယ်ကူစွာစတစ်ကာများ, စာသား, ကောက်ကြောင်းသရုပ်ပုံဖော်ခြင်းနှင့်ပိုပြီးနှင့်အတူဓါတ်ပုံတည်းဖြတ်နိုင်သည်။ အပေါင်း Menu ထဲမှာ app ထဲမှာကင်မရာကတဆင့် access ။
သင့်တည်နေရာကိုမျှဝေပါ - Glympse ™သင်သတ်မှတ်ထားအချိန်ရဲ့အရှည်အဘို့ရှေးခယျြလူတို့နှင့်အတူသင့်တည်နေရာကိုဝေမျှပေးနိုင်ပါတယ်။ တက်တွေ့ဆုံ, ဒါမှမဟုတ်လူငျသညျနှောင်းပိုင်းတွင်ပြေးနေအသိပေးဘို့စုံလင်သော။
တစ်ဦး eGift Send - အပေါင်း menu ကိုထိပုတ်ပါနှင့် eGifts icon ကို select လုပ်ပါ။ အလွယ်တကူလက်ျာ eGifting 30 ကျော်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှ eGift ကတ်များထည့်သွင်းရန်ကျယ်ပြန့်ခဲ့စာသားမက်ဆေ့ခ်ျမှတဆင့်တစ်ဦး eGift ကဒ်ကိုပေးပို့
ထုတ်ကုန်ဖြတ်ပြီး Sync ကို - အားလုံးသင့်ရဲ့ Device များပေါ်တွင် Verizon ကမက်ဆေ့ခ်ျကို Download လုပ်, သင်၏စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်နှင့်ကွန်ပျူတာကိုဖြတ်ပြီးထပ်တူပြုခြင်းမက်ဆေ့ခ်ျ။ သငျသညျခငျြအခါတိုင်း device များသို့ပြောင်းပါ။ ဘယ်နေရာမှာမဆိုသင့်ရဲ့တက်ဘလက်နှင့်အတူဖုန်းခေါ်လုပ်ပါ။
Mode ကိုမောင်းနှင် - သငျလမျးပျေါမှာအာရုံရကြပါဘူးဒါကြောင့်တစ်ဦးအော်တို-ပြန်စာရေးရန် Message ပေးပို့နှင့်ဝင်လာသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုအသိပေးချက်များကို disable မှ mode ကိုကားမောင်းအပေါ်ပါ။
HD ကိုအသံနှင့်ဗီဒီယိုတောင်းဆို - အရည်အချင်းများစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသက်ဆိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့တက်ဘလက်သို့မဟုတ်သဟဇာတစမတ်လက်ပတ်နာရီပေါ်မှာ Verizon ကမက်ဆေ့ခ်ျများ app ကိုရန်သင့်ဖုန်းနံပါတ်သို့လင့်ထားသည်နှင့်လုပ်သူတို့ (ဆယ်လူလာသို့မဟုတ် Wi-Fi ကို) မဆို network ပေါ်မှာချင်နေရာတိုင်းမှာဖုန်းခေါ်လက်ခံရရှိသည်။
အခြား feature များ:
ဇယားမက်ဆေ့ခ်ျများသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုပိတ်ထားရင်တောင်တိကျတဲ့နေ့စွဲ / အချိန်ကိုအပ်ခံရဖို့။
Yahoo ကရှာဖွေရေးနှင့်သင်၏ chat တွင်ထည့်သွင်းရန် images နဲ့ GIF များအဘို့ကို web ရှာပါ။
သင့်ရဲ့ smartphone ကို, သဟဇာတစမတ်လက်ပတ်နာရီ, iOS device, တက်ဘလက်, PC ကွန်ပျူတာ, MAC နှင့်ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာကနေ Wi-Fi ကိုကျော်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ပါနှင့်လက်ခံရရှိသည်။
မှာပြီးပြည့်စုံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ & Conditions ကိုကြည့်ရန်:
မှာ Verizon ကမက်ဆေ့ခ်ျများ privacy ကိုမူဝါဒကို View:
Verizon Messages အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Verizon Messages အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Verizon Messages အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Verizon Messages အား အခ်က္ျပပါ
myapptoys စတိုး049
Verizon Messages ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Verizon Messages အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 6.8.4
ထုတ်လုပ်သူ Verizon Wireless
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.verizonwireless.com/privacy
Release date: 2019-06-12 08:04:27
လက်မှတ် SHA1: 25:FF:90:5A:66:42:E5:3A:58:D6:00:F2:3C:01:E5:8D:23:63:B2:3F
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Verizon Wireless
အဖွဲ့အစည်း (O): Verizon Wireles
နယ်မြေ (L): Basking Ridge
Verizon Messages APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ